Dhaqdhaqaaqa UZE: Goobta Suuqa ee loogu talagalay Xayeysiinta Guryaha ee Guryaha | Martech Zone
Intii lagu gudajiray aafada, suuqa xayeysiinta ayaa qabsaday. Lafilayo, dabcan, laakiin hoos udhaca 19.1% ee H1 220 ayaa saameyn culus ku leh ganacsiyada. COVID-19 wuxuu dib u qaabeeyey muuqaalka macaamiisha, maadaama ay leedahay dhinacyo badan oo nolol maalmeedka ah. Dadku way safrayaan waxyar iyo kharash yar. Cudurka faafa ayaa la rajeynayaa inuu dhamaan doono bilaha soo socda, laakiin bilahaani waxay sare u qaadeen isbedelada muhiimka ah ee horay uga soo ifbaxayay dunida xayeysiinta.
Xayeysiinta moobilka ayaa sii xoojineysay. Xayeysiinta xayeysiinta iyo bartilmaameedka liita ayaa sidoo kale ku xayeysiiya xayeysiiyayaasha balaayiin dakhli lumay Taasi waxay ku riixaysaa inay eegaan kanaallada aan qalabka ku salaysnayn. Xayeysiinta daabacaadda ayaa hoos u dhac weyni ku yimid, iyadoo saadaasha dakhliga xayeysiiska ee sannadka 2025 la saadaalinayo inay noqon doonto mid ka mid ah shan meelood meel kuwa 2012.
Xayeysiinta bannaanka ayaa bixisa faa'iidooyin muhiim ah: dareemo kordhay (ma awoodid ka bood xayeysiin haddii ay hortaada taallo), ballaarin ballaaran, iyo cabir ballaaran. Si kastaba ha noqotee, maahan dhammaan marinnada inay diyaar u yihiin inay u adeegaan suuqa 2020-iyo-ka-baxsan. Boorarka xayeysiiska ah waxay si dhakhso leh u noqonayaan wax la soo dhaafay, laakiin guriga ka baxsan (OOH) iyo gaar ahaan digital-ka-guriga (DOOH) xayeysiintu waxay umuuqataa mid sii kordheysa oo noqon doonta wax mustaqbalka ah. Saamiga DOOH ee guud ahaan qarashka OOH ayaa ka booday 17% ilaa 33% shantii sano ee la soo dhaafay.
Dhaqaaqa UZE: Guudmarka
Waxaa aasaasay Jarmalka Alexander Jablovski, oo ah halyeey ka tirsan warshadaha baabuurta iyo khabiir ku ah khalkhalka dhaqdhaqaaqa, UZE, sida magaceedu tilmaamayo, wuxuu u keenayaa dhaqdhaqaaqa qaybta AdTech, oo ay weheliso sirdoonka farsamada iyo dareemayaasha dareemayaasha.
Gaadiidka waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin hal cabbir oo ah u rarida alaabada ama bini'aadamka dhibic A ilaa dhibic B. Waxa aan ogaanay bilowgii dhismaha UZE waxay ahayd in gaadiidku keenay gabi ahaanba barxad cusub oo loogu talagalay xayeysiiyaasha. UZE ahaan, waxaan kala jabin doonnaa silsiladaha silsiladda qiimaha oo dhan si aan u gaarno suuq aan la furin oo ay ku jiraan in ka badan 17 milyan oo gaadiid ganacsi ah oo loogu adeego Mareykanka oo keliya.
Alexander Jablovski, Maamulaha / CTO iyo aasaasaha UZE
Sababtoo ah kaliya 3% xayeysiinta Mareykanka ayaa ah OOH, in kabadan 300 milyan oo macaamiil macquul ah lama gaarin xilligan ay ka tagayaan albaabkooda hore. Adoo adeegsanaya gawaarida sida boorarka dijitaalka ah, UZE waxay hubineysaa in xayeysiiyayaashu ay la xiriiri karaan macaamiisha xitaa iyadoo wareegga caadiga ee dadku uu yaraado sababo la xiriira COVID-19. Gawaarida leh Qalabka UZE (qalabka shirkadda u gaarka ah) ama boorarka dijitaalka ah ee saddexaad ayaa awoodi doona inay bartilmaameedsadaan macaamiisha hawl wadeenada ka ah deegaanka ama xitaa si fudud u socda eeyahooda
Ka sokow ka faa'iideysiga helitaanka xayeysiiska macaamiisha hortooda markay ku jiraan maskaxda wax iibsashada, sida cilmi baaristu muujisay inay ka dambeeyaan giraangirta inta lagu jiro aafada, UZE waxay kaloo ka faa'iideysataa kaabayaasha dhammaadka illaa dhammaadka si looga gudbo caqabadaha caadiga ah ee xayeysiinta DOOH .
UZE waxay awood u yeelatay inay kaxeyso iibinta xayeysiiyaha iyadoo la adeegsanayo xogta dareemayaasha lahaanshaha taas oo naga caawinaysa inaan gaarsiino bartilmaameed xayeysiis sax ah. Sida laga soo xigtay xogta dhowaanta, suuqa xayeysiiska ah ee guriga ka baxsan ayaa la saadaalinayaa inuu koro 40% shanta sano ee soo socota ee Mareykanka
Cindy Jeffers, Madaxweynaha Mareykanka iyo COO, Dhaqdhaqaaqa UZE
Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha kale ee muhiimka ah ee shirkadda, oo ka dhigeysa kulankeedii ugu horreeyay ee Mareykanka ee magaalada New York, ay ka gudubto caqabadaha caadiga ah ee DOOH.
UZE waxay maamushaa geeddi-socodka oo dhan, laga bilaabo abuuritaanka suuq loogu talagalay xayeysiiyayaasha illaa horumarinta AI iyo dareemayaal loogu talagalay bartilmaameedka yar-yar.
Nidaamkani wuxuu yareeyay waqtiga iibsiga xayeysiinta 92%
Qalabka leh cabbirka shaashadda caadiga ah micnaheedu waa xayeysiistayaasha maahan inay dib u habeyn ku sameeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Dareemayaasha ayaa u sheegaya boorarka wax kasta laga bilaabo cimilada illaa nooca xaafadda, markaa waxaad arki doontaa xayeysiis jalaato ah maalin kulul iyo xayeysiis dallad ah inta lagu jiro xilliga xagaaga. Markii ay baabuurtu u dhaqaaqaan, dheh, Fifth Avenue, xayeysiisyadaasi waxay u wareegi doonaan alaabada macaamiisha ee raaxada.
Kaabayaashu waxay u oggolaanayaan cabiridda natiijooyinka ololaha.
UZE waxay iskaashi la sameysay Hövding si kor loogu qaado barkadooda shilka ee mootooyinka. Ka dib markii uu waday baaskiil shaashad weyn leh marinnada baaskiilka ee Berlin, oo u gudbinaya xayeysiinta saxda ah macaamilka saxda ah waqtiga saxda ah, Hövding wuxuu arkay iibka webka oo u boodaya 38%.
Iibkeenna guryaha ah ayaa kordhay 20% kadib markii aan la shaqeynay UZE laba bilood oo keliya. Waxaan awoodnay inaan gaarno suuq iibsade cusub oo aad u dhiirrigeliya. La shaqeynta UZE waxay gebi ahaanba beddeshay habka aan u xayeysiineyno inay naga sii fogeyso warbaahinta caadiga ah sida taleefannada casriga ah ama iimaylka ku saleysan iimaylka.
Adele Martens oo ku sugan Century21 Real Estate iyo macmiilkii hore ee UZE
Bilaabistu waa fududahay. UZE khibradaha iibsadayaasha warbaahinta iyo dijitaalka ka baxsan xirfadlayaasha guryaha ayaa halkan u jooga inay kaa caawiyaan ololahaaga Sidoo kale waxaad toos uga abuuri kartaa ololahaaga Suuqa UZE. Ku soo gal liiska alaabooyinka 'UZE ad' adoo adeegsanaya bixiyeyaasha xisbiga 3aad, DSPs, iyo isweydaarsiga xayeysiiska Maanta kubilaaw qaab cusub oo xayeysiinta guriga ka baxsan.
Booqo UZE Wixii Macluumaad Dheeraad ah
Tags: aiAlexander Jablovskisirdoonka macmalbaabuurtaxayeysiiska biilashadigital-ka-gurigadooxxayeysiiska mobiladaxayeesiinta mobileadvertising dibaddamagaalada smartkhariidad magaalo oo caqli badanuzeSuuqa UZEdhaqdhaqaaqa kaadicimilada